महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार -
महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार
मुलुकको अवस्था भयावह छ । देश कुन दिशातर्फ जाने हो अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । अस्थिरता छ । तर, अस्थिरता र अन्योल भए पनि सल्टाउन नसकिने अवस्था छैन । समाधानका उपाय छन् । देशको संकट समाधानका लागि पहिला राजनीतिक दल र दलका नेताले लोभ र लालच छोड्नुपर्यो । अर्काेतर्फ घमण्ड छोड्नुपर्यो ।
मुलुक र राष्ट्रको हितमा जथाभावी गाली गर्नुको साटो संसद्मा गएर हामी सबै कोरोनाको लागि अगाडि बढ्नुपर्यो । तर, झन्झन् डरलाग्दो अवस्था आउँदैछ । जनता र राष्ट्रहितको लागि कुरामा वार कि पार भएर जानैपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहेर दुई वर्ष जति कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्छ । ओलीले सक्नु भएन भने सबै दलहरूले अडान छोडेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वासिलो प्रधानमन्त्री महन्थ ठाकुर नै हुन सक्नुहुन्छ । उहाँ वयोवृद्ध पनि हुनुहुन्छ । लामो अनुभव र निष्कलंक छविको हुनुहुन्छ । सबैका लागि मान्य पनि हुनुहुन्छ ।
सबैलाई भन्न सक्ने मान्छे पनि हो । कसैका तिखोपन नगर्ने मान्छे हो । ठाकुरको नेतृत्वको सरकारलाई सबैले समर्थन दिएर आ–आफ्नो राम्रो मन्त्री बनाइदियो भने त दुई वर्षको कुरा हो । दलहरूले जनता र राष्ट्रको हितको लागि त्यतिमात्र गरिदिए देश नयाँ गतिमा बढ्न सक्छ।
फेरि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ । यस्तो बेलामा सबै मिलेर जानुपर्छ । कोरोनासँग लड्नको लागि सरकार पनि बलियो नै हुनुपर्छ। मान्छे बचाउन सकियो भने देश पनि बाँच्छ । जब हाम्रो जनता नै बचाउन सकेनौ भनेदेखि के गर्ने त ? अहिले अन्योलको अवस्था हो । अस्थिरताको अवस्था हो । सल्टाउन सकिने अवस्था हो तर नेताहरू लोभलालचमा आफ्नो पृष्ठभूमिहरू आफ्नो घमण्ड सबै छोड्यो भने सकिन्छ । अरू उपाय हामीसँग अहिले छैन।
अहिलेको शत्रु भनेको कोरोना हो । ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ । उहाँले कोरोनाको लागि केही गरी पनि सक्नु भएको छ । त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढे भइहाल्छ । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । मधेस, पहाड सबै मिलाउन सक्ने महन्थ ठाकुर नै हुनुहुन्छ।
अहिले कांंग्रेसले लोभ गर्नु हुँदैन । त्यस्तो गरेमा कांग्रेस डुब्न पछि पर्दैन । दलहरूलाई अवसर धेरै छैन । सबै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार उनीहरू नै हुन् । सबै उपयुक्त पनि हुन् । तर आजको दिनमा हामीले शान्त मलमपट्टी गर्नसक्ने देशमा ठूलो घाउ लागिरहेको छ । यो सबैलाई विचार गर्दा एउटा इमानदार र विश्वासिलो मान्छे महन्थ ठाकुर नै हुनुहुन्छ । महन्थ ठाकुर जसपाको लागि मात्र हुनुहुन्छ । राष्ट्रको लागि आज महन्थ ठाकुर नै उपयुक्त हुनुहुन्छ । सबै दलले उपयुक्त मानेर आरामसँग सर्वदलीय सरकार अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ।
केही दिनअघिसम्म चुनाव नै उपयुक्त हो जस्तो पनि लाग्थ्यो । तर कोरोना जुन रूपले अगाडि बढिरेहको छ आजभन्दा भोलि बढ्दैछ । यो अवस्थामा चुनावमा जानु हुँदैन । चिकित्सकको नजरले हेर्दा कोरोनाको महामारी झन्झन् बढ्नेवाला छ । चुनावमा जान्छु भनेर के गर्ने ? जान नसक्ने अवस्था पक्कै आउँछ । यो महामारीको बेला त्यसमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । दुई वर्ष बरू हामी साम्य भएर त्यसको लागि तयार भएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ । बरु सर्वदलीय सरकार बनाऔँ।
जहिले पनि मान्छेहरूले अगाडि के आउँदै छ भनेर को विचार गरेर बस्छ ? जुन जुन टापुहरूमा सुनामीको डर हुन्छ समुद्रीमा उनीहरूले ठूलाठूला यन्त्र राखेका हुन्छन् । सुनामी आउँछ भनेर पहिला नै सुझाव दिइरहेको हुन्छ । भुइँचालो पनि कहाँ कुन बेला आउन सक्न भनेर हामी मेसिनबाट हेर्छौं । अहिले हाम्रो मुलुकलाई कोरोना आउँदैछ ।
भारतबाट हाम्रोमा सुनामी आउँदैछ, त्यसलाई तत्काल रोकिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई रोकथाम गर्ने प्रयास प्रशस्त गर्नुपर्छ । अहिले हामी चुनावमा जान्छौं भनेर के गर्ने ? दुई महिनामा सायद हामी जान नसक्ने अवस्था हुनाले त्यतातर्फभन्दा सरकार बनाऔँ । र त्यो कोरोनाविरुद्ध सरकार लड्न तयार हुनपर्छ।
कोरोनाविरुद्ध लड्ने सरकार निर्माणका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि त्याग देखाउनुपर्छ । सर्वदलीय सरकार भयो भने आफै मन्त्री भइहाल्छ । जसपाले महन्थ ठाकुरलाई नै चयन गर्नुपर्छ । कांग्रेसले कुनै हालतमा लोभ देखाउनु हुँदैन । कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूप देखाएर गयो भने देखि कांग्रेस पनि नांगिने अवस्थामा आउँछ । किनभने दुई वर्ष पछि त चुनाव आउँदैछ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वका लागि महन्थ ठाकुर कलंक नलाएको व्यक्ति भएकाले उपयुक्त भन्न खोजिएको हो । अब सबैले त्याग गर्नैपर्छ । त्याग गरेर जनता र राष्ट्रको लागि देखाउने बेला आइसकेको छ । भारतमा दोस्रो कोरोना देखिसक्यो । अब भ्याक्सिनले कति काम गर्छ भने थाहा भइसक्यो।
अहिलेदेखि नै काठमाडौंका नाकाहरू र देशको सिमानामा सेना र सशस्त्रलाई जिम्मा दिनपर्छ । सरकारले गर्छु भनेर हुँदैन । आइसोलेसन क्वारेन्टिन, त्यता पनि व्यवस्थापन गरौँ । हस्पिटल तयार गर्ने बन्दोबस्त गरौँ । बाहिरबाट आउनेलाई रोकथाम गर्नुपर्छ । काठमाडौंको एयरपोर्ट आर्मीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । किनभने उनीहरूसँग जुन क्षमता छ र अनुशासन छ आर्मीलाई देखेर मान्छे तर्सिन्छ । हाम्रो लागि आर्मी बनेका देशको बचाउ गर्ने संस्था हो । अहिले लकडाउनको कुरा पनि नगरौँ । भएको अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ । व्यापारीहरूले आफ्नो बेल्ट टाइड गरेर बस्नुहोस् । लगानी गर्नेमा सकेसम्म बचाउ गर्नुहोस् । जे जति कारखाना छ बचाउ गर्नुहोस् । जति छ त्यसमा निरन्तर गर्नुहोस् अगाडि बढाउनेतर्फ नलाग्नुहोस् । लगानी गर्यो भनेदेखि त्यो लगानी डुब्न सक्छ । दिन खराब आउँदैछ बचाउ आफ्नो गर्नुहोस् । आत्तिएर विदेशतिर जाने प्रयास कसैले पनि गर्नु हुँदैन । –रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारिकामा प्रकाशित नागरक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितको विचार
खगेन्द्र संग्रौला भन्छन् आप करे तो रासलीला, बाकी सबका क्यारेक्टर ढीला !
बाँस्कोटाको ठोकुवा : नेपालका कैयन् ‘मिडिया फेक न्युज प्रोडक्सन फ्याक्ट्री’ हुन्
राजा बन्न भारत गएका ज्ञानेलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्छः आङकाजि शेर्पा
भीम रावलको नयाँ वर्षकाे शुभकामना– स्वेच्छाचारी, अत्याचारी सबको शीघ्र होओस् पतन
दीपक–जितुको अघि ‘मह जोडी’को सुझाव–‘प्रतिस्पर्धा नगरौं’
उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षलाई खाड़ीबाट खुला पत्र !
पूर्वको राता तारा अस्ताएको दिन: जब मदन भण्डारीसामु फुङ्ग उडेको अनुहार लिएर उभिएँ